Buckingham Palace any Londres
Ny mpanjaka anglisy dia fantatra manerana an'izao tontolo izao noho ny tantarany tamin'ny taonjato nifandimby sy ny Buckingham Palace tany Londres, izay, na dia misokatra ho an'ny mpizaha tany aza, dia mbola toeram-ponenana misy an'i Elizabeth II ankehitriny. Noho izany, mandray fepetra, fanasana sy fombafomba ofisialy ny tranonkala, ary ireo mpitsidika ihany koa dia afaka mandray anjara amin'izy ireo. Ny Buckingham Palace dia manana tantara tena mahaliana miaraka amin'ireo fomban-drazana sy fombafomba, mba hijery izay manokana tonga eto.
Amin'ity lahatsoratra ity dia hanambara ny zava-miafina amin'ny ao anatin'ny Buckingham Palace isika ary inona no mampiavaka ny fiarovana azy.
Tantaran'ny Buckingham Palace
Tamin'ny voalohany, tamin'ny taona 1703 no nanorenana ny Palace Buckingham tao amin'ny faritr'i Westminster teo an-joron'ny St. James sy Green Park, dia nantsoina hoe "Buckingham House" na Buckingham House ary an'ny Duke. Tamin'ny 1762 anefa dia nividy izany ho an'ny vadiny ny mpanjaka anglisy III George III. Noho izany dia nanomboka niova tsikelikely tao an-dapam-panjakana ny trano iray: imbetsaka no nisy fanorenana ho an'ny fitrandrahana sy ny famolavolana ny fasa, ary koa ny zavakanto dia nentina nanangona ny atiny.
Ny famantarana ny herin'ny mpanjaka Buckingham Palace dia teo ambanin'ny Queen Victoria, izay nitondra nandritra ny 60 taona mahery ary nanofana tanjaka sy loharano maro. Ho fahatsiarovana azy ao an-tokotany dia tsangambato iray.
Raha te hitsidika ny tranon'ny "Queen's House" ianao dia tsy mila mividy mpitari-dalana, azonao atao ny manontany ny mpandalo, satria fantatry ny mponina any Londres marina ny toerana misy azy, ary ho afaka hanazava ny fomba hahatongavana any Buckingham Palace.
Fanamboaran-trano anatiny ao Buckingham Palace
Ho an'ny mpizaha tany tonga hijery ny palace Buckingham, dia tena mahaliana hatrany ny mijery ny habetsaky ny efitrano misy ary ny fomba fijerin'izy ireo.
Hatramin'ny taona 1993, dia nanjary nahitana izany rehetra izany tamin'ny masoko, satria nisokatra ho an'ny mpitsidika ny lapa.
Amin'ireo trano 755 ao an-dapa, ireo mpizaha tany dia afaka mahita ireto efitrano manaraka ireto:
1. Apokalypsy natao ho an'ny fandraisana an-tanana ofisialy ary ahitana:
efitra fandraisam-bahiny maitso - toerana iray izay nasaina ireo vahiny avy amin'ny mpanjaka. Ahitana azy io: tranom-bakoka tena tsara tarehy, fanangonana sary hosodoko sy fitaovana enti-mody (watches, vases, candelabra)
ny seza fiandrianana - ny trano fisakafoanana nisy ireo bala niaraka tamin'ny fandraisana anjara tamin'ny fianakavian'ny mpanjaka;
sary misy sary - sary iray izay ahitana sary hosodoko 50 eo amin'ny sary hosodoko Fllamy sy holandeana. Io no heverina ho lehibe indrindra amin'ny lapa manontolo: ny 50 metatra ny lavany, ary 8 metatra ny sakany.
efitrano fisakafoana kanto iray natokana ho an'ny olona 60. Eo amin'ny rindriny dia afaka mahita ny sarin'ireo mpanjaka nanapaka an'i Angletera, nanomboka tamin'ny faha-IV.
2. Ny efitrano fandraisam-bahiny fotsy no efitra farany nisokatra ho an'ny fanaraha-maso. Ny zavatra rehetra ao anatiny dia vita amin'ny tonony fotsy.
3. Ny Royal Gallery - toerana izay naneho ny zavakanto sasany (matetika eo amin'ny 450 exhibits) avy amin'ny Royal Collection. Ny galeria dia miorina ao amin'ny faritra andrefan'ny lapa, akaikin'ny trano fiangonana.
Amin'ny volana vitsivitsy nandaozan'ny mpanjakavavy ny lapam-panjakana, ny efitra rehetra dia misokatra ho an'ny mpitsidika. Ary, mazava ho azy, afaka mandeha an-tongotra manerana ny vala manodidina ny lapa ny mpizaha tany.
Iza no miambina ny Buckingham Palace?
Ankoatra ny trano fandroana anatiny, ireo mpitsidika ao Buckingham Palace dia liana amin'ny lanonana fanovana ny mpiambina eo am-bavahadiny, izay mitondra ny Diviziona ao amin'ny Fitsarana, ahitana ny fitaovam-piadiana gadra miaraka amin'ny Royal Horse Regiment. Izany dia mitranga amin'ny 11.30 isan'andro avy amin'ny Aprily ka hatramin'ny Aogositra ary iray andro taty aoriana amin'ny volana hafa.
Casa Milà ao Barcelona
Ny Coliseum any Roma
Inona no tsy azo entina avy any Vietnam?
Resabe any Azerbaijan
Museums ao Saint-Pétersbourg ho an'ny ankizy
Serbia - Visa ho an'ny Rosiana 2015
Nahoana no manonofy ny trondro mena?
Ny fiantraikan'ny gripa amin'ny zaza
Ahoana ny fisafidianana ny mpanafika?
Ahoana ny fomba hananganana melon?
Ny endriky ny fery eo amin'ny tarehimarika nivelatra
Ny tombontsoa amin'ny legioma
Ny tafo eo ambonin'ny lavarangana
Ny tsy fahombiazana hormona aorian'ny fanomezana
Eggshell amin'ny alèhy
Ahoana ny fomba fametahana voatabia eny an-kalamanjana?
Lohataona / fahavaratra 2014
Mampifandray tapakila ao an-dalantsara
Porsche dia nahita fa tsy manan-tsiny tamin'ny nahafatesan'i Paul Walker
Te hanofa toeram-ponenana akaikin'ny toeram-pitsaboana i Beyonce, izay toerana hahaterahana
Ahoana ny fomba hanamboarana tongolo lay?